हामी कस्तो नेतृत्व चाहान्छौं ? - Sankalpa Khabar
हामी कस्तो नेतृत्व चाहान्छौं ?
९ आश्विन १९:३४
नेपाली काँग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनको सन्दर्भमा भएका वडा अधिवेशनमा विभिन्न किसिमका झाँकीहरू देखिएका छन् । निर्धारित मितिमा अधिवेशन हुने वा नहुने विषयले ठूलो अन्योल र अनिश्चितता देखाएको छ । एकै दिन सम्पन्न हुने भनिएका वडा, पालिका, प्रदेश तथा जिल्ला अधिवेशन फरक फरक मिति, समय र कार्य तालिकामा हुने भएका छन् । हुँदै छन् । केही जिल्लामा वडा अधिवेशनबाट नै साथीहरू बढारिएका छन् । नियोजित रूपमा वा अति विश्वासका कारण प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अनुहार वडा तहमा नै पराजित भएका छन् । यसले धेरै सकारात्मक सङ्केत गरेको छैन ।
पाँच वर्षका लागि छनोट हुने पार्टीको पदाधिकारी वा नेतृत्वको विकासका लागि ढोका नै बन्द गरिदिनु वा हुनु सुखद् होइन । कार्यकर्ता, नेता, समर्थक तथा शुभेच्छुकहरूले आफ्नो अभिमत जाहेर गर्दा विवेक पुर्‍याउनु आवश्यक छ । निर्णायक क्षणमा संयमता र विवेक पुगेन भने त्यसले ठूलो हानी पु¥याउँछ भन्ने हेक्का राख्न सक्नुपर्छ । नेपाली काँग्रेसका क्रियाशील सदस्य वा छानिएका प्रतिनिधिहरूले कस्तो व्यक्तिलाई अगाडि हेर्न चाहेका छन् ? कस्तो समाज र संस्कृति निर्माण गर्दैछन् भन्ने कुरा आफ्नो प्रतिनिधि छनोटबाट आम सन्देश दिँदैछन् । त्यसैले मतदानको क्षणमा नेतृत्व चयन गर्दा वा नेतृत्व चयन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पँदा धेरै विचार पु-याउनु सक्नुपर्छ । लगभग पाँच वर्षका लागि छनोट हुने नेतृत्वको अनुहार तपाईं सक्रिय सदस्य तथा वडा तहबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरूले निश्चित गर्ने हो ।
हामीलाई प्राप्त अवसरको सदुपयोग गरी हाम्रो आवश्यकतालाई बुझ्ने, योग्य, सक्षम र इमान्दार नेतृत्वको विकास हामी आफैबाट र हाम्रो निर्णयबाट गर्न सकेको खण्डमा सकारात्मक सन्देश जानेछ ।
यसरी निश्चित गर्दा हामी आफैँ अलमलियौँ, चुकेयौं वा फस्न गयौँ भने आवश्यक र उपयुक्त व्यक्ति नेतृत्वमा आउन सक्दैन । हामीले विश्वास गरी छनोट गरेको प्रतिनिधिले मुलुकको लागि आवश्यक व्यक्तिलाई नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा स्थापित गराउनुपर्ने दायित्व पूरा गर्न सक्दैन । देशको आवश्यकता र आम मानिसको चाहना बमोजिमको नेतृत्व मुलुकले पाउन सकेन भने असन्तुष्टिको पहाड चुलिने छ र ठूलो लगानीबाट प्राप्त भएको शासन प्रणाली नै धरापमा पर्नेछ । यसतर्फ गम्भीर भएर आफ्नो नेतृतवर प्रतिनिधि निर्वाचित गराउनुपर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी नेपाली काँग्रेसका स्थानीय तहका नेता तथा कार्यकर्ताले पूरा गर्नुपर्दछ ।
देशभरका युवाहरूको उत्साह र सक्रियता प्रशंसनीय छ । काँग्रेसको नेतृत्वमा आउन मुलुकको सेवा गर्ने तीव्र इच्छा अभिव्यक्त भएको देखिन्छ । यो ज्यादै खुसीको कुरा हो । युवा जोस, जाँगर र उत्साहलाई रचनात्मक र सिर्जनात्मक बनाउन सकिएको खण्डमा त्यसले नेपाली समाजलाई गतिशील, प्रभावकारी र उत्पादनशील बनाउन सक्छ । रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन आउन सक्छ । त्यसका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने र दक्ष्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यमा सरकारको ध्यान आकर्षित गरी देशभित्रै सम्भावनाको खोजी गर्ने गराउने कार्यको नेतृत्व युवाहरूले लिन सक्ने छन् ।
साँच्चै रुपानतरण हामीले हामीभित्रै गर्न सक्नुपर्छ । अरूसँग अपेक्षा राख्ने तर आफू यथास्थितिमा रहने, यो वा त्यो कुरा र कारण देखाएर उपयुक्त र आवश्यक निर्णय लिन नसक्ने उपयुक्त व्यक्ति छनोट गर्न तयार नहुने हो भने परिवर्तन सम्भव छैन ।
योग्य, सक्षम र इमान्दार व्यक्तिहरूको उपस्थितिले परिस्थितिलाई बदल्न सक्छ । मानिसको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन सक्छ । असन्तुष्टिको सम्बोधन गराउने वातावरण बन्न सक्छ । आक्रोश, कुण्ठा र नैरस्यताबाट युवा वर्गलाई आफ्नो दायित्व, जिम्मेवारी र कर्तव्य बोध गराउने सन्देश प्रवाह गर्न सक्छ । अनुकूल वातावरण भएमा युवा वर्ग देशभित्रै बसेर आफ्नो भविष्य बनाउन चाहन्छ । वैदेशिक रोजगारीले विप्रेषणको दायरा फराकिलो बनाएको भए पनि पारिवारिक, सामाजिक र राष्ट्रिय भावनामा गम्भीर क्षति पुगेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । विदेश सजिलो गन्तव्य होइन भन्ने धेरैले महसुस गरेका छन् । बाध्यात्मक रोजगार भएको वैदेशिक रोजगारीको दर धेरै घटाउन जरुरी छ भन्ने आत्म बोध विशेष गरी काँग्रेस नेतृत्वलाई गराउन आवश्यक छ ।
हाम्रो जनशक्तिले मरुभूमिलाई हराभरा बनाएको छ, तर हाम्रो जनशक्तिको पलायनले हाम्रो हराभरालाई मरुभूमि करण गराउँदैछ । यस बारेमा गम्भीर चिन्तन, मनन, विचार र विमर्श गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको खोजी नेपालले गरेको छ । त्यो नेतृत्व नेपाली युवाहरूले काँग्रेसको महाधिवेशनमार्फत देशलाई उपलब्ध गराउनु परेको छ । यसमा सफल हुनका लागि निर्णायक घडी आएको छ । हामीलाई प्राप्त अवसरको सदुपयोग गरी हाम्रो आवश्यकतालाई बुझ्ने, योग्य, सक्षम र इमान्दार नेतृत्वको विकास हामी आफैबाट र हाम्रो निर्णयबाट गर्न सकेको खण्डमा सकारात्मक सन्देश जानेछ ।
कम्तीमा पचहत्तर वर्षदेखि देश र जनताकै निम्ति लड्दै आएको पार्टीको चौधौँ महाधिवेशनबाट सकारात्मक उत्साहजनक र प्रभावकारी सन्देश प्रवाह गर्न सकेको खण्डमा त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा नै बद्लाव ल्याउने छ ।
के हामी हाम्रा आवश्यकता र माग अनुकूलको निर्णय गर्न र अपेक्षा अनुरूपको नेतृत्व छनोट गर्न सक्षम छौं ? हामी आफ्नै निर्णय र छनोटबाट पछुताउनु त पर्ने छैन ? एक पटक गम्भीर भएर सोचौँ । प्राप्त अवसरमा उपयुक्त निर्णय गर्न नसक्ने अनि पछुताउने बाटो पच्छ्याउनेकी आफ्नो निर्णय र छनोटप्रति गर्व गर्ने ? यतिबेर अधिकार हामी आफैसँग छ । कम्तीमा पचहत्तर वर्षदेखि देश र जनताकै निम्ति लड्दै आएको पार्टीको चौधौँ महाधिवेशनबाट सकारात्मक उत्साहजनक र प्रभावकारी सन्देश प्रवाह गर्न सकेको खण्डमा त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा नै बद्लाव ल्याउने छ । त्यो बदलावको अगुवाइ नेपाली युवाहरूले गरेको ठहरिने छ । नेपालीहरूको धैर्यता, संयमता, साहस र इमानदारिताको ऐतिहासिकता पुनर्स्थापित भई नयाँ युगको प्रारम्भ पनि हुनेछ ।
हामीले हाम्रो कमीकमजोरीहरू सच्चाउँदै अगाडि बढ्ने प्रण गर्नुपर्छ । गल्ती दोहो-याउने समय छैन, हामीलाई कसैले पनि माफी गर्दैन । साँच्चै रुपानतरण हामीले हामीभित्रै गर्न सक्नुपर्छ । अरूसँग अपेक्षा राख्ने तर आफू यथास्थितिमा रहने, यो वा त्यो कुरा र कारण देखाएर उपयुक्त र आवश्यक निर्णय लिन नसक्ने उपयुक्त व्यक्ति छनोट गर्न तयार नहुने हो भने परिवर्तन सम्भव छैन । हामी देशको आवश्यकताप्रति सचेत छौं, निष्ठा र इमान्दारितामाथि तलमाथि हुँदैनौ, उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिन्छौँ भन्ने आत्मविश्वास आफ्नो अभिमतमार्फत काँग्रेसका कार्यकर्ता र नेताले दिनुपर्छ ।
आज बडादसैँको अन्तिम दिन कोजाग्रत पूर्णिमा,महालक्ष्मीको पूजा गरेर दुर्गा…
२ कार्तिक ०८:१७